8 Antony XNUMX Tsy mahomby ny paikadinao karama isan-tsindry | Martech Zone
8 Antony XNUMX Tsy mahomby ny paikadinao karama isaky ny kitiho
Zoma, Febroary 6, 2015 Douglas Karr
Amin'ity volana ity amin'ny Edge an'ny Radio Web, mandeha mamaky paikady mandoa isan-tsindry izahay, miresaka tranga momba ny fampiasana, ary manome statistika sy fampahalalana taonina. Ireo mpivarotra dia mahatsapa ny sandany tsy mampino izay azon'ny mpivarotra isan-tsindry atao amin'ny fananganana fahatsiarovan-tena rehefa tsy manana fahefana amin'ny fikarohana ianao, mahazo fitarihana ary misambotra mpihaino mifandraika izay vonona ny hividy manaraka.
Izany dia nilaza fa valiny mahazatra henontsika amin'ireo tsy mino PPC dia:
Oh, nanandrana PPC izahay ary tsy nandeha.
Avy eo, teritery isika hifantoka amin'ilay famaritana nanandrana dia ary manohy mahita lesoka amin'ireo paikady naparitaka. Ho marin-toetra aho fa tsy mbola nahita client na iray aza tsy nahavita nampiasa karama isaky ny tsindry rehefa harahi-maso, tanterahina tsara, hosedraina ary hitaterana tsara ny fampielezan-kevitra. Ireto ny antony nahitantsika ny PPC tsy nahomby:
fanoloran-tena - Te hizaha toetra ny rano amin'ny PPC ny mpanjifa fa tsy te-hiditra daholo. Angamba izy ireo te-hanome vola ny tapakila $ 100 azony tamin'ny mailaka. Na izany na tsy izany, kely dia kely ny teti-bola voalohany ka tsy ampy hizahan-toetra ny fitambaran'ny teny lakile, manilika ireo teny tsy misy ifandraisany ary mahazo fitarihana ampy hamoronana fahatsapana raha mihatsara ny isa amin'ny kalitaony ary inona ny paikadim-pitenenana tokony hampiasaina. Ny fampiasam-bolanao voalohany dia mila lehibe kokoa noho ny vola laninao amin'ny PPC isam-bolana mba hitsapana, handrefesana, hanatsarana ary hametrahana antenaina amin'ny vidinao isaky ny mitarika, ny kalitaon'ny fitarihana ary ny sandan'ny fiovam-po. Ny PPC dia tsy fampielezan-kevitra na tetikasa tokana, fa dingana iray azo hatsaraina rehefa mandeha ny fotoana ary mitaky fitantanana ataon'ny mpiasa mahay.
Tsy misy pejy fitobiana - Rehefa manindry doka PPC aho ary mitondra ahy any amin'ny pejy fandraisana, dia mihodina avy hatrany ny masoko. Ny pejin-tranonao no sarintany misy ny atiny fa rehefa nanao ny fikarohana aho dia nomeko anao ireo teny lakile izay notadiaviko. Tokony hanana pejy fitobiana am-polony, raha tsy an-jatony, izay mifantoka indrindra amin'ny teny lakile kendrenao!
Safidy fiovam-po - Tsy ny olona rehetra no te-hividy amin'ny tsindry doka PPC. Ny sasany dia eo am-piandohan'ny fanapaha-kevitra ary te hanao fikarohana. Manome safidy hisoratra anarana, misintona whitepaper, misoratra anarana amin'ny fampisehoana iray, na safidy hafa dia ny fiovam-po rehetra izay afaka mitarika mpampiasa iray hikaroka mpitsidika efa miasa kokoa. Ary satria tsy nisoratra anarana izy ireo dia tsy midika hoe tsy handeha izy ireo ka mila manara-maso ireo hetsika hafa izay mitarika fiovam-po ianao. Fantatrao ve hoe firy amin'ireo mpanjifanao no nanomboka tamin'ny fampidinana whitepaper? Sa famandrihana mailaka? Fantaro mba hahafahanao manao ny sasany amin'ireo tolotra ireo amin'ny fampielezankevitra PPC.
Fanarahana fanentanana ratsy - Gaga foana aho rehefa manana pejy fandraisana tokana izay misokatra ho an'ny fifamoivoizana biolojika sy karama ny orinasa, saingy tsy manana fanarahan-kevitry ny fampielezan-kevitra hanavahana azy roa izy ireo Analytics. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny PPC dia mety ho tetika lehibe - tsy azon'izy ireo atao ny milaza izany amin'ny fijerena ny azy ireo Analytics. Makà masoivoho hanampy anao amin'ny fandefasana ny Analytics araka ny tokony ho izy mba handrefesanao tsara ny fahombiazan'ny fampielezankevitra.
Tsy misy fanaraha-maso telefaona - Tokony hanana ny orinasa tsirairay Fanaraha-maso antso an-tserasera an'ny Analytics amin'ny tranokalan'izy ireo. Rehefa mandeha mivezivezy izao tontolo izao dia mihamaro ny olona mandingana ny mijery ilay horonan-tsary na mamaky ny whitepaper ary miantso fotsiny ny nomeraon-telefaona. Izahay dia manana mpanjifa izay mizara ho diso ny fiezahany amin'ny varotra ary manavaka ireo antso an-tariby rehetra amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra toy ny fahitalavitra sy radio. Na dia miantso antso aza ireo fizarana ireo, dia fantatray fa ny fampielezan-kevitr'izy ireo dia mendrika ihany koa ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny fifamoivoizana an-telefaonin'izy ireo saingy tsy azonay refesina izany mandra-pandrotsahan'izy ireo vahaolana.
Tsy misy fitsapana - Tsy ampy ny mametraka pejy fananganana. Ny lokon'ny bokotra na ny tari-dalan'ny mason'ilay olona amin'ny sarin-tsarin'ny stock dia mety hisy fiatraikany amin'ny taham-pivadihan'ny pejy fipetrahana. Fitsapana ny pejy fitobiana dia singa iray manakiana ny fampielezan-karama isaky ny tsindry. Tokony hizaha toetra ny singa rehetra ianao hanatsarana ny CTR sy ny ROI ankapobeny amin'ny fampielezanao karama.
Votoatiny ratsy - Ny isa momba ny kalitao dia misy koa ny kalitaon'ny atiny ao amin'ny pejin-tranonao ary ny fiovam-po dia misy fiantraikany tanteraka amin'ny kalitaon'ny fampahalalana manerana ny tranokalanao. Teboka bala vitsivitsy tsy hanapaka azy io. Horonan-tsary, fijoroana vavolombelona, ​​fampiasana tranga, angona fanohanana, logo an'ny mpanjifa, sarin'ny mpiasa… ny atiny dia mila mandrisika ampy hahafahan'ny mpitsidika matoky fa afaka mahazo ny vaovao ilainy izy ireo rehefa mameno ny takelakao.
Tsy fahampian'ny tanjona - Vao tsy ela akory izay no nisy vinavinanay tonga tao ary tena faly izahay fa namaritra tanjona - te hanana fiverenana 7: 1 amin'ny fampielezan-karoka karamany. Ny fahafantarana ny tanjona, ny tahan'ny fiovam-po ary ny salan'isan'ny fotoana hanovana dia manampy ny maso ivoho PPC hahatakatra ny karazana fangatahana ilainy hamokarana, ny vola tokony ho laniny isaky ny mitarika, ary ny halavan'ireo fotoana ireo. Izy ireo dia afaka manitsy ny fampielezan-kevitra mifanaraka amin'izany ary manampy anao hamaritra teti-bola hahombiazana.
Misaotra an'i Erin ao Paikady momba ny tranokala ho an'ny firesahana ny sasany amin'ireto torohevitra ireto - aza hadino ny mandanjalanja Edge an'ny Radio Web ary henoy izahay ao amin'ny Stitcher, BlogTalkRadio, iTunes, MarketingPodcasts na iray amin'ireo fantsona fizarana podcast hafa!
Tags: radio web edgeerin sparkpejy pejyteti-bola fikarohanapejy fidirana fikarohana karamamandoa isaky ny kitihoppctetibola ppcpejy fananganana ppcpaikadin'ny tranonkala
Ahoana ny fomba hialana amin'ny olan'ny Pesky -2 amin'ny WordPress Slugs